Ujyaalo Sandesh | » हामी यस्तै त हो नि कमरेड ! हामी यस्तै त हो नि कमरेड ! – Ujyaalo Sandesh
मुलुकमा वर्ग्विभाजन भयो भनेर हतियार, झण्डा, डण्डा उठाउने पनि कमरेडहरु हो। हामीलाई लागेको थियो। तपाईले जनता र आफ्नो वर्गको ख्याल गर्नुहुन्छ। सत्तामा पुगेपछि जनताको वर्गलाई उकास्न उद्यम गर्नुहुन्छ। २०४६ सालदेखि हालसम्म कमरेडहरु कुनै न कुनै रुपमा सत्तामा हुनुहुन्छ। जनताले हिसाब किताब राखेका छन्, जनताको घरमा गास र बासमा साथ दिनुहुन्थ्यो। आफूले खाएको थाल आफै धुनुहुन्थ्यो। फोहोर पिंढी देखे बढारकुडार गर्नुहुन्थ्यो। सुख दुःखमा साथ दिनुहुन्थ्यो। सपना देखाउनु हुन्थ्यो, आफूले पनि सपना देख्नु हुन्थ्यो। नेता र जनताको वर्ग छुट्टयाउन गाह्रो हुन्थ्यो त्यतिबेला। जनताको पसिना तपाईँलाई प्रिय लाग्थ्यो, जनताको श्रमको माया लाग्थ्यो। जनता र नेता, कार्यकर्ताबीच नङ र मासुको सम्बन्ध भनेको पनि त्यही हो।
राज्यको पुनर्सरचना भयो। यो असल काम भयो। स्थानीय तहसम्म सरकार पुग्यो। जनतालाई सजिलो भएको छैन भनेर हामीले कहाँ भनेका छौ र? धेरैतिर कमरेडका जनप्रतिनिधि छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रमुख पनि कमरेडहरु नै हुनुहुन्छ। जनता भन्छन्, ‘कमरेडहरु मुखिया पो भए गाँठे ! नमस्कार पनि फर्काउन छाडे है।’निर्वा्चित भएपछि कमरेडको आनीबानीमा आमुल परिवर्तन आयो। हिसाब त जनतासँग हुन्छ नि ! स्थानीय सरकारको साधन स्रोतमा कमरेडकै हातमा आयो। जनताको आवश्यकता र चाहना अनुसार होइन, कमरेडको इच्छाअनुसार काम हुन थाल्यो। अनि साधन स्रोत कमरेडतिरै सोहरियो।
कमरेडको विश्लेषण छ, मुलतः पुँजीवादी क्रान्ति पूरा भयो। कमरेडले संविधान र अरु दस्तावेज बनाउनुभयो, समाजवादउन्मुख बाटोमा अघि बढ्ने भनेर। खासमा हिसाब जनतासँग छ, जुन वाद भने पनि त्यो नेता, कार्यकर्ता कमरेडलाई आएजस्तै भयो। यो व्यवस्थामा जनता बदलिए कि नेता तथा कार्यकर्ता करमेडहरु? जबकि कमरेडहरुले वर्ग भुल्नुभयो, बाटो भुल्नु भयो। आफू हिँडेको बाटो भुल्नु भयो। अप्ठ्यारोमा बास बसेका कोठा भुल्नु भयो। संकटमा सेल्टर दिएका साथ भुल्नुभयो। भुल्ने पालो त जनताको पनि आउँछ नि? एक दिन जनताले कमरेडहरुलाई भुल्ने छन्। हामी त यस्तै देख्छौ। हामी यस्तै त हो नि कमरेड ! कान्तिपुरबाट ग‌‌‍‌‌‌‌‌गा बिसि